शिक्षक सेवा आयोगको कार्यतालिका तयार, १७ हजार २२३ शिक्षकको नयाँ विज्ञापन मंसिरमा
November 12, 2021 N88LeaveaComment on शिक्षक सेवा आयोगको कार्यतालिका तयार, १७ हजार २२३ शिक्षकको नयाँ विज्ञापन मंसिरमा
काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले कार्यतालिका तयार भएको आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । आयोगले बिहिबार कार्यतालिका पास गरेको र आईबारसम्म आयोगको वेबसाईडमा राखिने जनाएको हो । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश कुमार श्रेष्ठका अनुसार १७ हजार २ सय २३ शिक्षकको नयाँ पदपूर्तिको खुला विज्ञापन मंसिरमा गर्ने कार्यतालिकामा रहेको बताएका छन् । केहि पाठ्यक्रम […]
२३ वर्षीय युवतीले जन्माइन् ११ बच्चा, एक सय बच्चा जन्माउने चाहना
November 12, 2021 N88LeaveaComment on २३ वर्षीय युवतीले जन्माइन् ११ बच्चा, एक सय बच्चा जन्माउने चाहना
मस्को । रुसकी २३ वर्षकी एक युवतीलाई बच्चा जन्माउने लत लागेको छ । उनले अहिलेसम्म ११ बच्चा जन्माइसकेकी छिन् । उनी एक सय बच्चा जन्माउन चाहन्छिन् । रुसकी २३ वर्षकी क्रिस्टिना ओज्टर्कले अहिले नै ११ बच्चाको पालन पोषण गरिरहेकी छिन् । क्रिस्टिनाले बताएअनुसार उनले ६ वर्ष पहिले छोरी जन्माएकी थिइन् । त्यसपछि बाँकी सन्तान उनले […]
जसले केपी ओलीको आलोचना गर्छ त्यो नेपाली हुँदै होइन
November 12, 2021 N88LeaveaComment on जसले केपी ओलीको आलोचना गर्छ त्यो नेपाली हुँदै होइन
काठमाडाैं । नेकपा एमाले दशौँ महाधिवेशनका लागि तीव्रताका साथ लागेको छ। चितवनको नारायणी किनारमा उद्घाटन भई सौराहामा बाँकी कार्यक्रम हुने बताइएको महाधिवेशन लक्षित भएर नेताहरुको चितवन भ्रमण बाक्लिएको छ। सहमतिको महाधिवेशन भनेर प्रचार गरिएको यस महाधिवेशनको तयारीको अवस्थाको अवलोकन गरी चितवनबाट बिहीबार फर्किएका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ महाधिवेशनको तयारी अवस्थादेखि लिएर […]
८३ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १३६ मा बिक्री – तर पनि निगम भन्छ– ‘लिटरमा १७ रूपैयाँ घाटा’ कसरी ?
November 12, 2021 November 12, 2021 N88LeaveaComment on ८३ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १३६ मा बिक्री – तर पनि निगम भन्छ– ‘लिटरमा १७ रूपैयाँ घाटा’ कसरी ?
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेर उपभोक्ताबाट अचाक्ली कर असुल्दै १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई सर्वसाधरणले १ सय १९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ । आयल निगमले भने पेट्रोलमै प्रतिलिटर साढे १७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउने […]
November 12, 2021 November 12, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डमुक्त नेपाल बनाउने उदघोषसहित पुरै गाउँका नेता-कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १२ को पिपिरा टोलवाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासहित सिंगो गाउँ एमालेमा समाहित भएका छन । माओवादी वीरेन्द्रनगर नगर कमिटी सदस्य कर्णवहादुर नेपालीसहित गाउँमा रहेका ४० जना माओवादी कार्यकर्ताहरु आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन । पार्टी सुदृढीकरण तथा संगठन विस्तार अभियान अन्तर्गत आज उक्त टोलवाट माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु प्रवेश गरेको नेकपा […]